ကျောင်းစာမေးပွဲ အချို့ ပြီးစီးမှုနှင့် သင်္ကြန်ကာလ နီးကပ်လာမှုကြောင့် အေးနေသည့် စစ်ကိုင်း ဂီတ? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ မတ် ၁၃
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ဂီတာလုပ်ငန်းများမှာ လွန်ခဲ့သည့်ခြောက် လခန့်မှစတင်၍ ရောင်းအားကျ ဆင်းနေခဲ့ရာမှ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အခြေခံပညာစာမေးပွဲတချို့ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည့်အပြင် သင်္ကြန်ကာလရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်၍ ဂီတာအရောင်းပြန်လည်တွင် ကျယ်မှုရှိလာကြောင်း စစ်ကိုင်းမြို့ ရတနာဂစ်တာလုပ်ငန်းမှ ဦးကြည်တင်က ပြောကြားသည်။
စစ်ကိုင်းဂီတာထုတ်လုပ်သူများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးဂီ တာထုတ်လုပ်ရောင်းချရာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ မြစ်ကြီးနား၊ မော်လမြိုင်၊ လားရှိုးနှင့်မူဆယ်ဈေးကွက်သာမက နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများအထိ ကုန်သည်များမှတစ်ဆင့် ရောင်းချမှုရှိနေသည်။ ”စစ်ကိုင်းမြို့ဂီတာလုပ်ငန်း တွေက တစ်လလုံးထုတ်လုပ်တဲ့ ဂီတာအလုံးရေက ပျမ်းမျှ ၃၄ဝဝ ရှိတယ်။ ထွက်သမျှ ဂီတာအားလုံး သူမိတ်ကိုယ့်မိတ်နဲ့ အနီးအ ဝေးမြို့တွေပို့ရတယ်။ စစ်ကိုင်းမြို့ သစ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ စစ်ကိုင်းဂီတာ လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အသင်းစုပေါင်း အရောင်းဆိုင်မှာလည်း လုပ်ငန်းရှင် တိုင်းလစဉ်တင်ရောင်းကြတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ဂီတာဈေးကွက်အေးသွားလိုက်တာ အောက်တိုဘာလ နောက်ပိုင်း ခြောက်လလောက်အ ရောင်းပါးသွားတယ်။ ဂီတာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်သမား တွေအလုပ်အကိုင်မပျက်အောင် မနည်းထိန်းထားကြရတယ်။ အခု မတ်လဆန်းကစလို့ စစ်ကိုင်းဂီတာ တွေ ခပ်သွက်သွက်ပြန်ရောင်း နေရပါပြီ”ဟု စစ်ကိုင်းမြို့ ဂီတာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦး မြင့်ထွန်း (New Wave Guitar)လုပ်ငန်းကပြောသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့မှထုတ်လုပ်သည့် ဂီတာများထဲတွင် ရောင်းတမ်းဝင်နှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများရှိရာ အနိမ့်ဆုံးဖောက်သည်ဈေးတစ်လက်လျှင် ကျပ် ၁၇ဝဝဝ မှ ကျပ် ၇၅ဝဝဝ အထိ ရောင်းဈေးရှိပြီး ရောင်းတမ်းဝင် အဆင့်ဂီတာထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် တစ်လအလုံး ၃ဝဝ မှ ၄ဝဝ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်သော် လည်း အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် တစ်လအလုံး ၁ဝဝ အထိသာ ထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်။ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ကိုယ်တိုင် ဂီတာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင် ၄ဝ ခန့်ရှိရာ အဆို ပါဂီတာလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်သည့်မှီခိုလုပ်သားဦးရေ ၃ဝဝ ခန့်ရှိသည်။
''ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ နဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တစ်ကားက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်မသိပေမယ့် အရမ်း??